Pi Andro: Famaritana ny tranga fampiasa - Infinity-Electronic
HomeNewsPi Andro: Famaritana ny tranga fampiasa
Pi Andro: Famaritana ny tranga fampiasa
Ny ampahatelon'ny mpanadihady dia nanamafy fa mampiasa Raspberry Pi ho an'ny tetikasa manokana izy ireo ary maherin'ny ampahatelon'ny injeniera no mampiasa ny Raspberry Pi ho porofon'ny concepto sy ny prototyping. Ny fampiasana hafa dia ahitana rafitra fitsapana / fitsapana testana ary famokarana.
34% amin'ireo mpamokatra dia mampiasa Raspberry Pi irery amin'ny tetikasany manokana.
Nilaza ny mpamorona fa ny antony fototra ampiasain'izy ireo ny Raspberry Pi dia noho ny vidiny, arahin-drizareo avy amin'ny fahombiazany sy ny fahalalany ny vokatra. Ny injeniera profesora dia miahy ny fampiasana maivana kokoa noho ny zavatra hafa rehetra rehefa manapa-kevitra ny hampiasa ny Raspberry Pi.
Nambaran'ny mpamboatra ny fakantsarin'i Pi sy ny fijerena ny sarimihetsika tiany indrindra.
Ireo injeniera matihanina dia mampiasa ny Raspberry Pi ho an'ny Internet of Things izay manaraka akaiky ny Industrial Automation & Control. Ny fampiharana hafa mampiavaka dia ahitana ny robotics, ny fampisehoana ary ny fampiharana mpanjifa.
Ho fankalazana an'i Pi Day, amin'ny 14faha Martsa, Farnell ihany koa dia manome rindrambaiko 10% amin'ny kitapo Raspberry Pi 3B + & Starter amin'ny 00:00 amin'ny 14faha Martsa hatramin'ny 23:59 amin'ny 31StMarch.
Mba hahazoana rindrambaiko 10%, tokony hitsidika ny mpanjifa Farnell ao amin'ny EMEA, Newark any Amerika Avaratra ary element14 ao APAC ary ampiasao ny code PIDAY10 amin'ny fisavana.